Malunga nathi -LANGFANG OLAN GLASS BEADS CO., LTD
Eyilwe ngo-2010, i-LANGFANG OLAN GLASS BEADS CO., LTD ngumenzi weengcali zeglasi e-China, ngobuchwephesha bemveliso ephambili, inkampani ibone unyaka nonyaka ukukhula kwishishini eliyimpumelelo namhlanje. Sinokuvelisa ubuhlalu beglasi obahlukeneyo ukhuseleko ezindleleni kunye nenjongo yemizi-mveliso. Kwaye inkampani inikezelwe kushishino lokhuseleko ezindleleni ngemishini yengcali yokhuseleko ezindleleni.
I-ISO 9001: 2015
Iimveliso zethu eziphambili
Iimveliso zethu eziphambili zibonakalisa ubuhlalu beglasi bokumakishwa kwendlela, i-sandblasting glass beads, ii-microspheres ezingenanto, ukugaya ubuhlalu beglasi, ubuhlalu beglasi obuphakamileyo kunye nemibala yeglasi. Ukubonakalisa ubuhlalu beglasi bokumakishwa kwendlela yenye yezona mveliso zithandwayo, kusetyenziswa izinto ezisemgangathweni ophezulu ekuphawuleni, sinikela ngokuphila ixesha elide, ukhuseleko kunye nokubonakala unyaka wonke, kunye neglasi yeglasi efakwe kwizinto zethu zokukhanya ubusuku bonke.
Iminyaka engaphezu kwama-10 yamava ukuvelisa nokuthumela, iimveliso zethu iphumelele igama elihle kwimarike yamazwe ngamazwe ukuba umgangatho ophezulu kunye nexabiso kukhuphiswano. Ukuveliswa kwethu kugcinwa kugcinwa, kuphuculwe kwaye kwandiswe amandla okuhlangabezana neemfuno ezandayo zeemveliso zethu. Ukuphunyezwa okuqhubekekayo kweenkqubo zokuvelisa kuluncedo ekusixhaseni ukufikelela kwi-ISO 9001: 2015 Certification.
Ngesiseko sophuhliso lwetekhnoloji, inkampani iya kugcina ingqalelo enkulu kulawulo olusisiseko, umgangatho ozinzileyo, ngokuqhubekayo ukuphucula iinkonzo zangaphambi kokuthengisa, ukuthengisa kunye neenkonzo zokuthengisa emva kokuthengisa, kunye nokwenza ukhuphiswano lweemveliso zethu. Ukusukela oko isiseko, inkampani igcina inkolelo "yokuthenga ngetyala kuqala, ukujolisa kumthengi, eyona mgangatho kunye nexabiso elifanelekileyo". Sijonge phambili ukuva kuwe kunye negalelo lakho elixabisekileyo kuphuhliso lwethu kwixesha elizayo. Siza kubonelela ngenkonzo yomthengi ophezulu kunye nempendulo. Enkosi ngeshishini lakho kunye nenkxaso! I-Langfang Olan Glass Beads Co., Ltd iya kuhlala ikhusela kuwe endleleni.